Terms and Conditions of Valentine's Day Special Giveaway | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့! Terms and Conditions of Valentine's Day Special Giveaway | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့!
1.ဒီမြှင့်တင်ရေးအသက်ကြီးတရားဝင်အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူမှသာရရှိနိုင် 18 သို့မဟုတ်ကျော်.
2.This promotion will be active daily 9th – 15th February 2017 (ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်).
4.ဆုကြေးငွေများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်, players must depositaminimum of £10 and enter bonus code: GQVDAY
5.တစ်ဆုကြေးငွေ 10 spins will be added to your account
7.ကစားသမားတစ်ဦးချင်းစီ၏အမြင့်ဆုံးခံရလိမ့်မည် 10 free spins per deposit on Gonzo’s Quest
9.အခမဲ့လှည့်ဖျားအထိကြာနိုင်ပါတယ်3သင့်အကောင့်မှအသိအမှတ်ပြုခံရဖို့မြှင့်တင်ရေးရဲ့အဆုံးကနေအလုပ်လုပ်ရက်ပတ်လုံး.
10.ယင်းလှည့်ခြင်းများကစားသမားကိုသက်ဝင်နိုင်ရန်အတွက် Gonzo ရှာပုံတော်ဖွင့်ရမယ်
11.အလှည့်ခြင်းများကနေရရှိခဲ့ပါတယ်အားလုံးအနိုင်ရရှိဆုကြေးငွေရန်ပုံငွေအတွက်ဆုခနှင့် 30x ၏အာမခံလိုအပ်ချက်ရရှိခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းဆုကြေးငွေပမာဏကိုသယ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်.
12.စုစုပေါင်း 75,000 spins will be given away over the promotional period
13.သာကဤဂိမ်းအပေါ် wagering: Starburst, Gonzo ရှာပုံတော်, အမွှာလည်, Spinata Grande, ထုချွန်းပုံ, piggy စည်းစိမ်ဥစ္စာသည်, South Park, ဂျက် Hammer, ချိတ်သူရဲကောင်းများ, ငါ့ကို dazzle, နီယွန် Stax, Dracula, ဂျက်နှင့် The Beanstalk, အောင်မြင်သော, ရက်ကြောင့်မှားယွင်း Rush, အလင်းအိမ်, ဒစ္စကိုလှည့်ဖျား, Koi မင်းသမီး, ဒဏ္ဍာရီလာအိမ်ထောင်မကျခင်, Sparks, စတစ်ကာများ, မှော် Portal, Blackjack Classic, အသီးဆိုင်, ပန်းပွင့်, မျှော်စင် Steam, Fisticuffs, ကံကောင်း Angler, လေဆင်နှာမောင်းခြံနဲ့ Escape, Subtopia, ဂျက် Hammer 2, ဘစ်ဘန်း, invisible က Man, South Park2ရက်ကြောင့်မှားယွင်း Chaos, slot ဘုရင်, ဂြိုလ်သား, တောက်ခြင်း, Guns N Roses, နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ၏မဟာ, မောင်း, Aloha, လူးစ Hendrix, ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား, Nrvna, ဝက် Fly သောအခါ,, Motorhead, Atlantis ၏လျှို့ဝှက်ချက်များ, ခရစ္စမတ်၏လျှို့ဝှက်ချက်များအအာမခံလိုအပ်ချက်များ၏လျှော့ချရေးဆီသို့ဦးတည်ရေတွက်ပါလိမ့်မယ်
16.ထိုအာမခံမီကရန်ပုံငွေဆုတ်ခွာပြီးပြည့်စုံသည်အကောင့်အားလုံးကိုဆုကြေးငွေနှင့်ဤ attribute ရဲ့ဆိုအနိုင်ရရှိကိုပယ်လိမ့်မည်.
17.ပြီးတာနဲ့သင့်ရဲ့ဆုကြေးငွေအလှည့်တရားဝင်ဆက်လက်တည်ရှိအသိအမှတ်ပြု7နေ့ရကျ. သငျသညျဤကာလအတွက်အာမခံလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်စွက်မထားသင့်, ဒီမြှင့်တင်ရေးမှကျန်ရှိသောဆုကြေးငွေရန်ပုံငွေများကိုသင့်အကောင့်မှဖယ်ရှားပစ်မည်.
18.ကစားသမားတစ်ဦးတည်းသာ FreeSpin ဆုကြေးငွေတစုံတယောက်မျှအချိန်တွင်တက်ကြွဖြစ်နိုင်သည်ကိုသတိပေးနေကြပါတယ်, သွားပါကျေးဇူးပြုပြီး “ငါ့အကောင့်” သင့်ရဲ့တစျခုလုံးကိုဆုကြေးငွေတန်းစီကြည့်ရှုရန်အပိုင်း
19.စီမံခန့်ခွဲမှုကိုပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်, မဆိုယှဉ်ပြိုင်မှုသို့မဟုတ်မြှင့်တင်ရေးကိုရပ်ဆိုင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲ (သိ. သို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို) မည်သည့်အချိန်တွင်နှင့်ကြိုတင်သတိပေးချက်မပါဘဲ.
20.စံသတ်မှတ်ချက်များကို & အခွအေနလျှောက်ထား.
စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအပ်နှံနှင့်ရ 25 လှည့်ခြင်းများ